Mala ijoollee Horsiisee Bulaatiin barsiisuu dandahan keessaa tokko barattootaa Hosteelii jaaruu
Sadaasaa 08, 2011
Horsiisee Bulaan warra jireennii isaanii horiitti hirkatu,marraa fi bisaan barbaada yaahuun akka jarii kun jireenna wayyaahaa jiraachuuf miila gadi hin dhaabanne tolcha.
Ijoolleen jara kanaalleen keessumattuu yoo bonaa fi gannaa faa, horiin godaanuu fi maati isaani gargaaruuf barumsa dhiisanii keessaa yaahan. Yoo hedduu isuma warra isaanii malkaa dabarsuuf jedhanii qormaatallee dhiisan.
Barnoota ijoollee horsiisee bulaa silaa maaniin jabeessuu dandahan?Diida Jiloo Galgaloo,nama ganna 22,Yuniveristy Adaamaatii eebbifamee,qabxii qaraa qabxii 4.0,eegee ammoo 3.8 argachaa dhufee eebbifamee barataa jabaa,”student of the year” jedhamee waancaa warqii badhaafame.
Ufiifuu ilma warra horiiti,jireennuma gaargaltichii ijoolleen baaddiyaa barattu keessa asi gahe,lafa bonii horii hedduu nama irraa fixee,namii bona baqataa lafa marutti,Miyoo dhufee fulaa amma jiru tana gahe.Qabxii guddoo waan argateef fuluma itti baratetti barsiisaa tolchan.Gaafa barate sun waan jireenna horsiisee bulaatiin jijjiiran jedhe keessaa waan hedduu qorate.
“Naannoo Horsiisee Bulaatti Hosteelii jaaruun akka malee qarqaarti,maaniif jennaan…ijoolleen baaddiyaa mana waan diraa hin qamneef mana kireeffattee galti,kanaayyuu waan baafatanuu hin qaban fa. Hosteelii banuufiin ammoo akka ijoolleen jara kanaa barumsa adoo gargar hin kunne barttu gargaarti.”
Jireennii Horsiisee Bulaa gara hedduuttu waluma fakkaata,rakkoo marraa-bisaanii,rakkoo dira gurgurdaa fi gabayaatti dhiyaachuu dhabuu,horiin yoo hedduu bonaa fi oolaan irraad dhumuu dabalee waan hedduu.
Diidii barmusa fixate eebbifamuuf waraqata akka akkaa barreesse,kana keessaa tokko adoo Mooyyalee Itoophiyaatii fi Mooyyalee Keenyaatti gabayaa horii ta addunyaa banananii horiisee bulaan faaydaa guddaatti irraa argamaa jedhe fa.
Namii Mooyyaletti horii gurguratu akka waan hannaan tokko dhoffate gurgura adoo gabayaan tun seera qabaattee beekaniif namii guddoo irraa faaydaa argataa jedha.Akkuma fulaa dhibiilleetti beekkmatee naannoo tanalleetti beekkamuu malte jedha.
Wannii dhibiin Diidii jireenna horsiisee bulaatiin jijjiiruu malan jedhee;hosteelii banuu,gabayaa addunyaan beettu naannoo horsiisee bulaatti banuu,mala horsiisee bulaan bona irraa dandamatuun barsiisuu,waan hedduun gargaaruu,yaada qalbii namaa jijjiiruu dabalee waan hedduu.
Mee waan jireenna horsiisee bulaatiin jijjiiranii ka beettan nuu barreessaa,ta Diidii Jiloo Galgaloo jedhellee MP3 tana irraa caqasaa.
Mee waan Diida Jiloo gaafanne caqasaa